IsiseMome iNkandla May yalonyaka – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/IsiseMome iNkandla May yalonyaka
IMeya uThami Ntuli
Umjaho usuphenduke inoni emphakathini nakubahwebi bendawo
UNHLABA usengemqoka ekhalendeni loMkhandlu iNkandla. Ngale nyanga kule ndawo kubanjwa umjaho wamahhashi iNkandla May, owaqala njengomcimbi omncane lapho abanumzane bendawo babenza into eyabe ingabizwa ngokuchitha isizungu. Nokho namuhla lo mjaho usunesasasa elimangalisayo. Bheka nje ngoba kawusagcini ngokuqeda isizungu kepha usuyingxenye yekhalenda lesifundazwe kanye nomnotho wendawo.
Wenzeka endaweni yasemakhaya kobantu lo mjaho osusematheni kwabanngi njengeDurban Vodacom July. Ubanjwa minyaka yonke nokwenza umphakathi waseNkandla namaphethelo uthole ithuba lokuzilungisela ukuze ngosuku lomjaho kube nguwashiywa washiywa, hhayi kuphela ngezinjomane kepha nangegqephu. Umbono woMkhandlu ngekusasa lalo mjaho ngelomcimbi ozokwelekelela lo Masipala kanye nesifunda emikhankasweni yezokuvakasha. Lokhu kwenza isidingo sokwakha ingqalasizinda ekulungele lokho. Khona lapho kusho amathuba amaningi kubantu bendawo njengoba abayobe beyizivakashi nakanjani bayokudinga ukuphathwa ngandlela thize.
Iphawula ngamathuba kwezokuvakasha iMeya uNtuli ithe: “Siqhakambisa ezokuvakasha eNkandla sifisa ukuthi uma zifika izivakashi zethu sizithathe sizikhombise ubuhle beNkandla kanye nezindawo ezinomlando. INkandla May isibeka ethubeni elihle lokuba siveze izifiso zethu uma sikhuluma ngezokuvakasha”.
Lo mjaho usulinoni nakubahwebi bendawo, eMgwagweni namaphethelo abakwazi ukuthola amakhasimende ngosuku lomjaho. IMeya ibe nomlayezo ezakhamuzini zaseNkandla izeluleka ngokuthi zize zingalilahli ithuba eliyigqayizivele njengaleli.
“Yize lokhu siphawula ngakho njengegolide lethu, iqinisio lithi ifa leziwula lidliwa yizihlakaniphi. Uma sizogcina ngokukhuluma singenzi bazofika abanye bafike basephuce inhlanzi emlonyeni. Engizama ukukusho wukuthi kungakuhle ukuthi amalungu omphakathi waseNkandla azicijele leli bhizinisi lezokuvakasha
ngoba linomhlomulo omangalisayo. Sibonile kwenzinye izindawo lapho ngenxa yokwedembesela kwaleyo miphakathi, umnotho namuhla usuphethwe ngabantu bangaphandle. Ngithi lokho akungasifici njengabantu baseNkandla. INkandla inothe ngomlando kaZulu okubalwa iSigodlo, idlinza leNgonyama uCetshwayo kaMpande kanye nalowo wamaqhawe ezizwe. Ongoti bezokuvakasha bayavumelana ukuthi le ndawo isethubeni eliyingqayizivele nxa kufikwa kwezokuvakasha nokuyinto engakhulisa umnotho wendawo. UMkhandlu oholwa nguNtuli ubukeka ukuqonda lokho nokufakazelwa yizinhlelo oqhamuka nazo okubalwa iNkandla May.
Kulo nyaka umjaho uzoba mhla zingama-26 kuNhlaba.